१० लाख माग्दा १ करोड १० लाख पठाएछ ! – Online Bichar
१० लाख माग्दा १ करोड १० लाख पठाएछ !
Online Bichar 8th February, 2019, Friday 12:35 PM
काठमाडौं, २५ माघ । धेरै सांसदको गुनासो छ, आफ्नो क्षेत्रको विकास योजनाका लागि सरकारले बजेट दिएन । तर, शुक्रबार संसदमा अनौठो गुनासो सुनियो, १० लाख माग्दा १ करोड १० लाख पठायो !
यस्तो गुनासो गर्ने सांसद हुन्, राजेन्द्र लिङदेन । झापा ३ बाट निर्वाचित राप्रपा सांसद लिङदेनका अनुसार ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम’ अन्तरगत झापाको केचनाकबल गाउँपालिकामा यस्तो भएको हो ।
उक्त योजनामा १ करोड १० लाख खर्च गर्ने ठाउँ नै नभएको उनको दाबी छ । राप्रपा सांसद लिङदेनले भने, ‘मैले त यो संसदमा संघीयतामा विमती राख्ने म मात्र छु होला, संघीयतालाई व्यवहारमै खतम गर्ने मन्त्री नै हुनुहुँदोरहेछ । अब संगत गर्नुपर्ला ।’
अनसन बस्ने चेतावनी
उनले संसदमा आफू एक्लो प्रतिनिधि भएका कारण आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई उपेक्षा गर्ने, दुःख दिने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । सांसद लिङलेनले भने, आवश्यक परे साच्चै अनसन बस्छु ।’